आठ आरोहिको मृत्यूपछि ठप्प भएको कञ्चनजंघा हिमाल आरोहणमा हिम्मती तीन महिला – Radio Miteree (Latest News)
दुइवर्षसम्म आरोहिको मृत्यू भएपछि बन्द रहेको ताप्लेजुङ स्थित बिश्वको तेश्रो अग्लो हिमशिखर (८,५८६ मिटर) कञ्चनजंघामा यो सिजनमा तीनजना महिलाको महिला पाइला पर्ने भएको छ ।
‘थ्री वुमेन, थ्री टप’ नामक अभियान सुरु गरेका तीन जना नेपाली महिलाले आरोहणको तयारी गरेका हुन् । ओखलढुङगाकी माया शेर्पा, सोलुखुम्वुकी पाशाङल्लामु शेर्पा र दोलखाकी दावा याङजोम शेर्पा चैत २५ मा आरोहणकालागि त्यसतर्फ प्रश्थान गरेका हुन । जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरणको सन्देस बोकेर अप्रिल ७ तारेख (चैत २५ गते) काठमाण्डौं बाट हिडेका हुन ।तयारी भएको माया बताउछिन् । ‘अहिले खर्चको बन्दाबस्त मिलाउने, सामान खरिद गर्ने, लगायतका काम भइरहेका छन,’ मायाले भनिन्, ‘ ४५ देखि ५० लाख रुपैंया सम्म खर्च हुने भएकाले ब्यवस्थापनमा समय लागेको छ ।’ यहा ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थलवाट सदरमुकाम फुङलिङ, लेलेप, घुन्सा हु“दै जानुपर्छ । हिमाल आरोहणको क्रममा ४५ देखि ५० दिनको समय लाग्छ ।
२००७ मा बिश्वको सर्बोच्च शिखर (८,८४८ मि.) सगरमाथा, २०१४ मा पाकिस्तानमा रहेको दोश्रो अग्लो हिम शिखर (८,६१२ मि.) माउण्ट केटु को आरोहण गरिसकेको टोलि तेश्रो हिमाल आरोहण गर्न लागेको हो । कम आरोहण हुने र तुलनात्मक रुपमा अप्ठेरो भएकाले तयारी पनि त्यही अनुसारले भइरहेको टोलि सदस्यहरुको कथन छ । यो हिमालको पा“चौं क्याम्प निकैनै अप्ठेरो र लामो भएको आरोही नादा शेर्पा बताउछन् । आरोहणकालागि सेभेट समिट ट्रेकिङ एजेन्सिले सहयोगको तयारी गरेको छ ।
‘महिलाहरु सजिलो हिमाल मात्र आरोहण गछर्न भन्ने भ्रम चिर्नु छ । जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावका बिषयमा जनस्तरसम्म जानकारी गराउनु छ । त्यो सन्देस तल्लो क्षेत्रदेखी हिमाली वस्तिसम्म पुर्याउछौं,’ आरोही दलका पाशाङल्हामुले भनिन्, यो स“गै महिलाहरुपनि कञ्चनजंघाको सफल आरोहण गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नुछ ।’
पर्यटन मन्त्रालयको पर्बतारोहण शाखाका नायव सुब्बा ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार सन् २०१५ देखि कञ्चनजंघा हिमालको आरोहण भएको छैन । आरोहणकालागि स्वदेसि तथा बिदेसी कोहीपनि आएका छैनन । सन् २०१३ र १४ मा आरोहणका क्रममा यहा लगातार दुर्घटना भएका थिए । २०१३ मा तीन र १४ मा पा“च जनाको आरोहणकै क्रममा ज्यान गएको थियो ।
उनिहरुको शवपनि निकाल्न सकिएको छैन । महिला टोलिले भने ब्यवस्थित ढंगले चुनौतीको सामना गर्दै आरोहण गर्ने तयारी गरेका छन् । सगरमाथामा सरकारलेनै बाटो बनाइदिन्छ । भर्याङ लगाइदिन्छ । कञ्चनजंघामा आफैंले बनाउनु पर्ने भएकाले पनि आरोहीले कम चासो राखेको पटक÷पटक सगरमाथा आरोहण गरेका ताप्लेजुङ लेलेपमा मिङमा शेर्पा बताउछन् । उनको बुझाईमा दुर्घटना सगरमाथा, मकालु जस्ता हिमालमा पनि भइरहेकाले कञ्चनजंघालाई मात्रै ठुलो मान्नु पर्दैन । जलवायु परिवर्तनका कारण दुर्घटना बढेको उनको बुझाइ छ ।
अहिले सम्म कञ्चनजंघामा अधिक आरोही पठाइरहेका सेभेन समिट ग्रुपका प्रवन्धक मिङमा शेर्पा चौथो देखि पा“चौ बेसक्याम्पमा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउछन् । कञ्चनजंघा आरोहण समेत गरेका उनले यो भागमा खाल्टो जस्तो भएको र दुर्घटना भए उद्धारमा पनि कठिनाइ हुने बताए । ८ हजार २ सय मिटर उचाइको यो क्याम्प अरुको तुलनामा लामो पनि छ ।
पचहत्तर हजार रुपैंया बराबरको सिक्किमे रक्सि नष्ट